Daawooyinka Qabowga: Ku yaree calaamadahaaga Talooyinkan | Ragga Stylish
Maxay yihiin daaweynta ugu fiican ee qabow? Marka bilaha qabowgu yimaadaan, halista hargabka iyo hargabku way sii kordhaan. Way ku habboon tahay in la ogaado khiyaanooyinka kaa caawinaya inaad iska yarayso calaamadaha oo aad dhakhso u bogsato.
Waxaa jira waxyaabo badan oo aad sameyn karto si aad uga hortagto hargab inuu maalintaada qadhaadh ka dhigo. Soo ogow daaweynta ugu wax ku oolka badan ee lagula dagaallamo hargabka.
1 Maraq digaag
2 Cab biyo kugu filan
4 Afuuf sankaaga
5 Ereyga ugu dambeeya
Ayaa aan soo marin maraq kulul oo ah daaweynta qabowga guriga? Dhammaan daaweynta qabow, maraq digaagga ayaa laga yaabaa inuu yahay midka ugu waxtarka badan. Waxay u muuqataa in, in ka badan arrin maaddooyin ah, sirtu waxay ku jirtaa kuleylka ay u keento jirka, gaar ahaan cunaha, iyadoo gacan ka geysaneysa kala-goynta xabka si loogu baabi'iyo qufaca.
Laakiin maraq digaag ma aha istiraatiijiyadda kaliya ee kaa caawin karta diirimaadka jirkaaga oo ay ku adkaato ciriiriga xanaaqa. Maadaama sirtu ku jirto diirimaadka, inaad cabto wax kasta oo kulul waa fikrad aad u fiican (tusaale ahaan shaah ama galaas caano kulul). Dariiqo kale oo lagu heli karo waxtarka uumiga hargabku waa in la qaato qubeys kulul. Waxa kale oo aad uumi kartaa si aad u suuxdo sanka (Waxay ku lug leedahay inaad wejigaaga saarto baaquli biyo kulul ah oo aad si tartiib ah u neefsato).
Hubso inaad marwalba biyo haysatid. Waana in si habsami leh u ahaato biyo waa muhiim aad u muhiim ah dhinacyo badan oo caafimaadka ah, oo ay ka mid yihiin la dagaalanka hargabka. Markaad hargab yeelato, waxaa lagugula talinayaa inaad siiso jirkaaga qadar dheeri ah oo fuuq ah, maadaama xabku uu yareeyo heerarka qoyaanka jirka.
Intaas waxaa sii dheer, cabitaanka dareeraha ayaa kaa caawinaya in xabku u adkeysto wax yarna way kuu fududaanaysaa inaad ka saartid qufaca iyo sanka. Waa in la ogaadaa in cabitaannada oo dhan ayan kaa faa'iideysan doonin hargab. Kuwa ay ku jiraan kafeyn ama aalkolo waa in laga fogaadaa, maxaa yeelay waxay ku yeelan karaan uun saameyn lid ku ah: waxay sababi karaan fuuqbax. Halkii, Cabitaannada isotonic, shaaha geedaha iyo cabitaanka miraha ayaa loo tixgeliyaa ikhtiyaarro wanaagsan haddii aad ku caajiso biyaha la cabbo.
Heerarka hoose ee fuuq-baxa ay sababaan hargabku sidoo kale waa lagu xusay maqaarka, gaar ahaan aagga sanka, maaddaama waa inaan ku darnaa isticmaalka joogtada ah ee maryaha. Sidaa awgeed, fuuq baxu waa inuusan noqon gudaha oo keliya, laakiin sidoo kale dibedda. Si loola dagaallamo saameyntan qabowga tixgeli mari sanka iyo bushimaha xiiran iyo qoyaanka. Daawadan ayaa si gaar ah muhiim ugu ah shaqada, maadaama ay u sii dheertahay qoynta maqaarkaaga, waxay kaa caawin doontaa kahortaga saameynta hargabku inuu ahaado mid muuqda oo muuqaalkaaga ah.
Cune xanuun waa calaamadaha ugu xun ee hargabka. Waana midaan kaliya kaa hor istaagi doonin inaad si caadi ah uhadasho, laakiin cunida iyo xitaa aamusnaanta waxay noqon kartaa ciqaab yar. Markaad dhuun xanuun dareento, wixii gargaar ah, haba yaraadee, waa la soo dhaweynayaa. Dareenkan, waxaa jira daaweyn badan oo guriga ah oo aad isku dayi karto, badankooduna waxtar badan ayey leeyihiin, ugu yaraan si ku meel gaar ah. Mid ka mid ah ayaa ah biyo kulul shaaha milix ah. Waan ognahay inaysan ahayn cabitaanka ugu cunnada badan, laakiin xusuusnow inaadan u baahnayn inaad liqdo, kaliya waa inaad luqluqdaa ka dibna tuftaa.
Mid ka mid ah dawooyinka hargabka ugu fiican ayaa sidoo kale ugu fudud: sanka oo la garaaco. Eryiddooda ayaa ka wanaagsan liqitaankooda, taas oo u muuqata caqli gal, laakiin qof kastaa uma muuqdo inuu wax fahansan yahay. Si looga hortago xabka in uu galo dhegahaaga, laguguma talinayo inaad si aad ah isku qarxiso. Tixgeli inaad riixdo sanka sankiisa intaad si adag u adkeyneyso tan kalena si tartiib ah u afuufayso.
Xusuusnow in daawooyinka qabow ay yareyn karaan astaamaha oo xitaa mararka qaarkood ay gaabin karaan muddadooda, laakiin sinnaba uma soo saari karaan daawo mucjiso ah. In kasta oo khiyaanooyinkan ay kaa caawin karaan inaad ka dhigto kuwa loo dulqaadan karo, nasiib darro waa inaad ku noolaataa dhowr maalmood adkaysashada astaamaheeda. Celceliska muddada qabowgu waa hal toddobaad.
Dhinaca kale, sidoo kale daawo u sameynta si aan dadka kale u qaadsiin wax badan ayey kaaga sheegaysaa. Maxaad sameyn kartaa si dadka kugu xeeran uusan u qaadsiinin? Inaad guriga ka tegin dhawr maalmood waa xalka ugu wax ku oolka badan. Intaas waxaa sii dheer, nasashada waxay ka caawisaa soo kabashada hore iyo si ka fiican, maadaama jidhku u baahan yahay dhammaan tamarta suurtagalka ah ee lagula dagaallamayo infekshanka. Laakiin had iyo jeer suurtagal maahan, maadaama ay jiraan waajibaadyo shaqsiyadeed iyo mid mihnadeed oo muhiim ah oo u baahan fiiro gaar ah oo aan dibadda guriga ku leenahay.
Haddii ay tahay inaad banaanka ula baxdo hargab, tallaabada ugu horreysa waa inaad si fiican u xirxirto si looga hortago inay xaaladdu sii xumaato. Marka ay timaado yareynta fursadaha faafa, waxaad ku dhaqmi kartaa dhowr talooyin:
Xaddid tirada dadka aad xiriirka la leedahay
Ku daboolo afkaaga xusulka gudihiisa markaad qufacayso ama hindhisayso si looga hortago jeermiska inuu ku faafo deegaanka
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Caafimaadka » Daaweynta qabow